The Belmont Report anoti nheyo Kuremekedza Persons inoumbwa maviri akasiyana zvikamu: (1) vanhu vanofanira kubatwa sezvo zvionera uye (2) vanhu Nemhaka kuzvionera anofanira kodzero dzokuwedzera kuchengetedzwa. Kuzvionera nehasha anoenderana kurega vanhu kudzora upenyu hwavo. Nemamwe mashoko, Kuremekedza Persons kunoratidza kuti vaongorori havafaniri kuita zvinhu vanhu vasina zvavo mvumo. Achitsoropodza, ichi chinobatanidza kunyange mutsvakurudzi anofunga kuti chinhu chiri kuitika hakukuvadzi kana kunotobatsira. Kuremekedza Persons kunotungamirira yokuti vechikamu-kwete vatsvakurudzi-kuwana kusarudza.
In tsika, nheyo Kuremekedza Persons yakapirikirwa kureva kuti vaongorori vanofanira, kana zvichibvira, kugamuchira omuzvarirwo kubva kuvatori vechikamu. The chikuru Pfungwa pamwe omuzvarirwo ndechokuti vatori vanofanira kupiwa pamwe akakodzera mashoko nenzira inonzwisisika pamanyorerwo uye ipapo vanofanira nokuzvidira kubvumirana kuzopindura. Mumwe nemumwe mashoko aya ave pachayo vave nouchapupu dzokuwedzera gakava uye bhezari (Manson and O'Neill 2007) , uye ndichanwisa chose rose chikamu gare muchitsauko chino kuti omuzvarirwo.
Kushandisa nheyo Kuremekedza Persons kune mienzaniso mitatu kubva pakutanga chitsauko zvinokosha zvinhu hanya mumwe wavo. Muchiitiko chimwe nechimwe, vatsvakurudzi vakaita zvinhu vechikamu-vakashandisa mashoko avo (Ravirai, Ties, kana Time), akashandisa kombiyuta yavo kuita kuyerwa basa (encore), kana ndanyoresa navo chinhu kuedza (Emotional Contagion) Musingaitisani kwavo mvumo kana ruzivo . The kutyora nheyo Kuremekedza Persons haangoerekani kuti zvidzidzo izvi tsika dzinobvumira chipatara chinobatsira impermissible; Kuremekedza Persons mumwe dzemitemo mana. Asi, kufunga Kuremekedza Persons anoita pfungwa dzimwe nzira kuti zvidzidzo dzingagona kunatsiridzwa tsika dzinobvumira chipatara chinobatsira. Somuenzaniso, vaongorori angadai yakawanikwa rwakati mvumo kubva vechikamu pakudzidza asati akatanga kana pashure ndokuguma; Ndichaedza kudzokera izvi zvaramba kana ini vakurukure omuzvarirwo zvakadzama pazasi. Pakupedzisira, tsvakurudzo ethicists anosimbisa kuti kunetseka pamusoro kutyora evanhu kuzvionera inomuka kunyange nyaya zvachose benign zveBhaibheri. Concerns pamusoro pokukuvadza uye njodzi ndezvomuzvarirwo kupinda chemufungo nehanya, asi ivo vari kazhinji anotaurirwa pasi nheyo Beneficence, nheyo kuti ini vanaani.